Home Parenting Parent Guide နေ့ရက်တိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်အားတက်ကြွမှုကို ပေးနိုင်သော ပျော်ရွှင်ကလေးတစ်ယောက်ကို ပျိုးထောင်နည်း
မိဘတွေအနေနဲ့ ကျွန်မတို့အားလုံးက ကလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးလိုချင်ကြပါတယ်။ ဘဝမှာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်စရာမလိုဘဲ သူတို့ကိုအောင်မြင်စေချင်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေက သူတို့တစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာ ပျော်ပျော်နေတတ်ဖို့ မလွယ်ကူဘူးလား? တစ်ခြားလူတွေမရှိပေမယ့် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ကလေးတွေရော မရှိဘူးလား? ဒီတော့ တစ်ယောက်တည်းလည်း ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ကလေးကို ဘယ်လိုပျိုးထောင်ကြမလဲ?
၁။ သင်ကိုယ်တိုင်တစ်ယောက်တည်းလည်း ပျော်ရွှင်နေဖို့ အရင်လုပ်ပါ
သင့်ကလေးကို ပျော်ရွှင်စေချင်တယ်ဆိုရင် သင်ကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်နေရပါမယ်။ ကလေးတွေရဲ့ စံပြဖြစ်ပါစေ။ ကလေးတွေဟာ သင်ထင်ထားတာထက် သင့်ကို ပိုအတုယူကြပါတယ်။ သင်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်နေပါစေ အဲဒါကို ပုံတူကူးဖို့ သင်ယူပါလိမ့်မယ်။ သင်မပျော်ရင် သင့်ကလေးတွေဟာလည်း စိတ်ဖိစီးနေပါလိမ့်မယ်။
သင်ပျော်နေတယ်လို့ပြောရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ကလေးတွေမြင်နိုင်ဖို့ တက်တက်ကြွကြွအလုပ်လုပ်ရပါမယ်။ ဆိုလိုတာက သင့်ကလေးတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ဆက်ဆံတဲ့အခါ ပြုံးပါ။ သူတို့နဲ့ စကားစမြည်ပြောဆိုရာမှာ အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး ပါဝင်ပါ။ မကြာခဏလုပ်သင့်တဲ့အရာနောက်တစ်ခုက ကလေးတွေပျော်နေတာကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါ။ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးတွေကို မွေးရတာ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့သဘောထားကိုလည်း မေမေတန်ဖိုးထားပါတယ်။
၂။ သူတို့မှာရှိတဲ့အရာတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ သင်ပေးပါ
ကလေးတွေကို ပျော်ရွှင်နေစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်မယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ၎င်းတို့ရှိနေတာကို တန်ဖိုးထားတတ်စေဖို့ သင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မနက်ခင်းနှိုးလာတဲ့အခါ သူတို့မှာရှိတဲ့အရာတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်စေဖို့ မျှဝေပေးပါ။ ဘုရားသခင်ကို ကျယ်လောင်စွာ ကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့ သင်ပေးပါ။ မနက်ခင်းမှာ သူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာ (၅)ခုအကြောင်းကို ပြောပြစေပါ။
၃။ ဝေဖန်မှုကို တန်ဖိုးထားတတ်အောင် သင်ပေးပါ
အမှားတစ်ခုကို ဝေဖန်တာထက် အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ချီးကျူးတာက အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမယ့် ကလေးတွေက ဝေဖန်ခံရတဲ့အခါ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာ သင်ယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့အမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ လူအများစုက ဝေဖန်မှုဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘဲ ဝေဖန်ခံရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အထင်ကြီးလေးစားမှုတွေ လျော့ကျစေပြီး ဒေါသကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဝေဖန်မခံရတာက အကောင်းဆုံးဆိုပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဝေဖန်ခံရမှုတွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဝေဖန်ခံရမှုဆိုတာ ဘဝရဲ့ ဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေဖို့ အကြီးမားဆုံးသော ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ တူညီသော အမှားတွေကို ထပ်ခါတလဲလဲ မပြုလုပ်မိစေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
Previous articleခေတ်သစ် မိဘအုပ်ထိန်းမှုက မိရိုးဖလာမိဘအုပ်ထိန်းမှုထက် ပိုကောင်းသလား?
Next articleကလေးတွေနှင့်အတူ ကြင်နာမှု ဖြန့်ဝေဖို့ ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်း (၆)ခု